Ọrụ 13 na utu Pi maka ụlọ anyị, dị mfe ma baa ezigbo uru! | Akụrụngwa n'efu
Rasberi Pi oru ngo
Enwere ọtụtụ oru na utu Pi Na ekele maka MagPi, kwa ọnwa enwere ọrụ ndị ọzọ anyị nwere ike iji Raspberry Pi na obere ego mee. Na nke a, anyị ga-ekwu maka 20 ọrụ anyị nwere ike iji Rasberi Pi mee maka ụlọ anyị.
Ihe omume na-eme ka ụlọ ahụ baa uru ma doo anya na ojiji nke Raspberry Pi dị ka minipc, ihe anyị niile maraworị. Ọrụ ndị a bụ maka ụlọ mana ọ bụghị naanị ha bụ ọrụ dị maka mpaghara a, ọ bụ ezie na ha bụ ndị kachasị ewu ewu.
1 Medialọ Mgbasa Ozi Homelọ
2 Ọnụ ụzọ SSH
3 Lelee anụ ụlọ anya
4 Firewall ụlọ
5 Ụlọ Google
6 Arụrụ ụlọ Amazon ikwughachi
7 Yabasị Pi
9 Arcade igwe
11 Nlekọta okpomoku
12 Akpaka mmiri
13 Chinggbanye ọkụ na ngwaọrụ ndị ọzọ
14 Ebe Weather
15 Otu ọdụ FM na mkpịsị aka gị
16 Kọmputa feeder anụ ụlọ
17 Njikwa olu maka ụgbọala gị
18 Igwefoto ihe mmetụta
19 MoccaPi ma ọ bụ kọfị kacha mma ejiri Pipe Pi
20 Ogige dijitalụ mara mma
Medialọ Mgbasa Ozi Homelọ
Iji Utu Pi na Raspbian jikọtara ya na Kodi anyị nwere ike inwe ọnụ ala ma ọnụ ụlọ ọrụ mgbasa ozi. Usoro ahụ dị mfe ma anyị nwedịrị ike ịgbanwe ya na OpenElec. N'ọnọdụ ọ bụla, anyị ga-achọ naanị Raspberry Pi, eriri HDmi na jikọọ ya na TV anyị na eriri ikuku ejiri igwe na-arụ ọrụ inwe ike ịchịkwa nhọrọ sistemụ arụmọrụ. Gwọ ahụ dị ọnụ ala ma n'ezie ọ bụ ihe na-atọ ụtọ maka ụlọ.
Ndị a bụ iwu ndị a na-ahụkarị na Raspberry Pi
Ọnụ ụzọ SSH
Ọtụtụ n'ime anyị chọrọ mpụga ịnweta kọmputa na kọmputa anyị. Nke a nwere ike ịbụ ọgbaghara maka adreesị IP na maka nchekwa netwọk, yabụ anyị nwere ike jiri Raspberry Pi ka o nwee adreesị IP ọha ma jikọọ na site na SSH na Raspberry Pi nke ga-enwe njikọ na kọmputa ndị dị n'ụlọ ahụ. Kọmputa ndị a ga-enwe adreesị IP nke onwe ya, yabụ ndị na-abụghị ndị ọzọ agaghị enwe ike ịnweta ya. Maka ọrụ a, naanị anyị ga - achọ Raspberry Pi yana Raspbian. Naanị nke ahụ.
Lelee anụ ụlọ anya
Ihe ọzọ na-atọ ụtọ maka Rasberi Pi mejupụtara iji Pi Cam a ma ama iji nyochaa ụmụ ọhụrụ ma ọ bụ anụ ụlọ. Anyị kwesịrị ijikọ Pi Cam na Raspberry Pi anyị ma debe igwefoto n'ọnọdụ iji dekọọ ebe anụ ụlọ ma ọ bụ nwa ọhụrụ nọ. Mgbe ahụ, iji hụ ihe ha mere ma ọ bụ ihe ha na-eme Anyị ga-ejikọrịrị Raspberry Pi site na SSH ma ọ bụ iji ngwa njikwa iji lee ihe edere ma ọ bụ nke a na-edekọ.
Ihe nlele a bara uru maka ulo ma o di oke onu karie oru ndi ozo, ebe anyi aghaghi itinye ego PiCam na ego nke Raspberry Pi. N'ọnọdụ ọ bụla ọ bụ ọrụ na-adọrọ mmasị maka ụlọ.
Mepụta igwe eji eme ihe nke gi na Raspberry Pi
Anyị ekwuola maka ịnweta kọmputa anyị site na mpụga mana anyị nwekwara ike ime Raspberry Pi ọta megide mwakpo mpụga. N'okwu a anyị ga-achọ naanị Raspberry Pi, ụlọ ọrụ (ọ bụrụ na anyị nwere ọtụtụ kọmpụta nwere njikọ wired) na Tor maka Raspberry Pi.
N'ihi Tor na teknụzụ yabasị ya ", anyị nwere ike ịnweta mgbidi siri ike ọ bụghị naanị na-echebe anyị pụọ na mwakpo kamakwa anyị nwere ike ịrụ nchọgharị weebụ na-enweghị aha. Na nke a oru ngo dabere na software. Maka Raspbian a ma ama ka anyị tinye Tor na teknụzụ ya. Ihe dị mfe ma dị mfe.
Ndị na-enyere aka mebere na-enweta. Na nke a, omume a ejikọtaghị ya na otu ngwaike ma ọ nwere ike ịbụ ngwaọrụ ọ bụla. Ya mere, onye ọ bụla nwere ike ime nke a Raspbery Pi oru ngo na ike gị mebere nnyemaaka ekele rasberi Pi. Google dịla ogologo oge mmekota na MagPi ha weputara ihe iru kaadiboodu Google Home. Ọ bụ ọrụ na-adọrọ mmasị ma baa uru maka ụlọ. Emeela mgbanwe na nso nso a nke dochiri kaadiboodu kaadi a ụlọ intercom site na 80s.
Arụrụ ụlọ Amazon ikwughachi
Ọ bụrụ na Homelọ Google abanyela na Pipe Pi, Amazon Echo abụghị obere na ogologo oge tupu Google anyị enwee ike ịmepụta Amazon Echo anyị. Echo bụ ụsụ ụkwu amamịghe nke gbanwere. Ndị ọrụ nwere ike wulite nke anyị Amazon Echo oyiri ekele Raspberry Pi. Oteela aka kemgbe anyị na-agwa ka esi ewu ya ma ọ bụ n'ezie nnukwu ọrụ iji nwee n'ụlọ. Ngwaọrụ a nwedịrị ike dị mma karịa ngwaahịa mbụ n'ihi na anyị nwere ike ịme ya obere ma ọ bụ tinye mgbakwunye nke ngwaọrụ Bezos enweghị.
Anyị ekwuola na mbụ maka iwulite Firewall nke ụlọ na-ekele Raspberry Pi. Yabasị Pi nwere ọrụ yiri nke ahụ, mana n'adịghị ka ọrụ ndị ọzọ, Yabasị Pi na-enye nnukwu nchekwa ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịnweta site n'èzí ka ìgwè dị n'ụlọ anyị. Yabasị Pi na-eji protocol nke Tor Network, otu netwọkụ na-eji ọrụ nke yabasị n'ígwé na-enye ndị ọzọ nche na nzuzo karịa nkịtị. Gbanye njikọ a Anyị na-agwa gị otu esi arụ ọrụ a.
Kọmputa bụ ihe nkịtị, nkịtị na ihe fọrọ nke nta ka ọ dị mkpa n'ụlọ. Ihe na-adịghị ka nke ahụ afọ iri atọ gara aga. N'ọnọdụ ọ bụla, ekele maka ọrụ a maka Raspberry Pi na eReader, anyị nwere ike inwe kọmputa dị mkpa nke nwekwara ezigbo ihuenyo iji zere imebi ahụ ike nke anya anyị. N'adịghị ka ọrụ ndị ọzọ, KindleBerry Pi bụ ihe na-atọ ụtọ maka eziokwu dị mfe na ị nwere ike jigharị ngwaọrụ dịka ihe ochie eReader ma ọ bụ nwee ike ịnweta eReader na kọmpụta na otu ngwaọrụ.
N'ọtụtụ ụlọ, ebe a na-egwu egwuregwu abụrụla ụlọ dị mkpa n'ụlọ. Nọmalị, a ọma sofa na ọtụtụ egwuregwu Ngwa dị ka video consoles, media emmepe, wdg ... Anyị na-agwa gị mepụta igwe eji eme ihe eji eme ihe eji egosi egwuregwu vidio dika SuperMario Bros. Ekele dịrị Pi, anyị nwere ike ịmepụta igwe arcade nke oge gara aga na-akwụghị ụgwọ pesetas 25 XNUMX XNUMX nke ha rịọrọ anyị maka egwuregwu. Egwuregwu ndị ahụ nwere ike gbanwee na ọnụ ahịa ya, ekele maka ihe ndị eji emegharị na Raspberry Pi Zero W, fọrọ nke nta ka ọ dị ntakịrị. Gbanye njikọ a Ga-ahụ ozi ndị ọzọ gbasara iwulite igwe eji eme ihe maka ime egwuregwu anyị.
N'ịlaghachi na ọrụ gara aga, na nke a anyị na-ekwu maka mmeputakwa nke mbụ Game Boy. Enwere ike ịmepụta igwe arcade a nke ọma na Raspberry Pi Zero W. Ihe siri ike banyere oru a bu okike nke casing. Ma ọ bụ na anyị jiri igwe ochie ochie ma ọ bụ na anyị ga-ebipụta ikpe na 3D nbipute. Mana, site na nke a, ọnụ ahịa ya na ntụrụndụ ọ na-enye dị obere. Anyị na-agwa gị okwu banyere oru ngo a ma ọ bụrụ na ị chọrọ, na Instructables ị ga-ahụ ndị ọzọ yiri oru ngo na obere iche.
Ọnọdụ okpomọkụ dị n'ụlọ dị ezigbo mkpa. Otu akara ma ọ bụ abụọ nwere ike ime ka anyị na-emefu ọtụtụ narị euro kwa afọ na kpo oku ma ọ bụ ọkụ eletrik. Yabụ iji ihe nyocha nke okpomọkụ nwere ike ịbụ nnukwu enyemaka. Maka Proyect a Anyị ga-achọ Mgba Pi, ihe mmetụta okpomọkụ na ihuenyo LCD nke na-egosi ihu igwe nke ụlọ ọ bụla. Ọ bụrụ na anyị chọrọ imepụta ọnọdụ okpomọkụ dị mma karị, anyị nwere ike iji mbadamba Arduino gbasaa ihe mmetụta niile n'ime ụlọ ọ bụla n'ụlọ, mana site na mfe Raspberry Pi anyị nwere ike nweta nsonaazụ dị ukwuu. Gbanye Ozizi Ga-ahụ ozi ndị ọzọ gbasara ọrụ a.
N'oge ememme, ọtụtụ na-aga ezumike. Arụ ọrụ dị mkpa mana nke ahụ na-ewetara anyị nsogbu maka ụlọ n'ihi na anyị kwesịrị ịgba mmiri mmiri, na-azụ anụ ụlọ, wdg ... N'okwu a enwere ọrụ na ekele maka ọrụ a na Rasberi Pi anyị nwere ike ịnwe akpaka ịgbara mmiri maka osisi anyị. Na mgbakwunye, n'ihi ọrụ Wi-Fi nke Raspberry Pi, anyị nwere ike ọbụna rụọ ọrụ ahụ site na ama anyị. Na nke a Akwụkwọ nkuzi Ga-ahụ sọftụwia ahụ, ndepụta nke ihe ndị ahụ na ọbụlagodi ntuziaka maka ọrụ a.
Chinggbanye ọkụ na ngwaọrụ ndị ọzọ
Na mbụ anyị ekwuola maka ịmepụta firewall ụlọ ka ị nwee ike ikwurịta okwu na mpụga. Ọrụ a na-atụ aro ịnye ọrụ na mgbidi ahụ n'ihi na anyị ga-achọ ya ma ọ bụrụ na anyị ekepụta ọrụ a. N'ihi Rasberi Pi na ọkụ ọkụ, anyị nwere ike ịgbanye ọkụ n'ụlọ ma ọ bụ ụfọdụ ngwa si anyị ama. Ọbụna anyị nwere ike ime otu ihe ahụ na ọkụ nkịtị, mana maka nke a, anyị ga-ewu ihe nkwụnye ọkụ nke "na - alaghachi" nke ọma na bọlbụ ahụ. Na Instructables ị nwere ike ịchọta ndu ụlọ nke oru a na-adọrọ mmasị, n'ihi na ihe karịrị otu echefuola iji gbanyụọ ọkụ ọ dịghị otú ahụ?
Iji a na ihuenyo, anyị nwere ike mfe ịmepụta a metlọ ebe a na-enyocha ihu igwe zuru oke ga-enye anyị ọtụtụ ozi dị ka okpomọkụ, iru mmiri, nrụgide ikuku, ultraviolet radieshon, ọkụ etoju, na ọbụna nitrogen dioxide etoju.
Ọ bụrụ na anyị jisie ike mee ka ọ bụrụ ikpe mara mma ma lekọta ya nke ọma, anyị nwere ike ịnwe ọpụpụ ihu igwe dị egwu n'ụlọ anyị, na elu nke ihe ọ bụla anyị nwere ike ịzụta, dịka ọmụmaatụ, na Amazon.
Na njikọ a ị nwere Ntụziaka na-na-arụ ọrụ ugbu a.
Otu ọdụ FM na mkpịsị aka gị
Ọ bụrụ na agụụ gị bụ redio, ekele nke Raspberry Pi, eriri nke ga-arụ ọrụ dị ka antenna na edemede Python nke ga-enyere anyị aka igwu egwu ahụ, anyị ga-enwe ike ịghọ onye na-eweta obere ihe omume nke ndị enyi anyị ga-enwe ike ige ntị, dịka ọmụmaatụ, site na redio dị nso.
Site na ngwaọrụ a, nke ị nwere ike iwulite site na usoro ndị a, anyị ga-enwe ike ịgbasa na frequencies sitere na 1 MHz ruo 250 MHz, ọ bụ ezie na ihe kachasị mma ga-abụ ịgbasa na ụda FM dị ọkọlọtọ (site na 87.5 MHz ruo 108.0 MHz). Buru n'uche na ị ga-asọpụrụ mgbasa ozi nke ọtụtụ ọdụ ndị nwere ọdụ gọọmentị n'oge niile.
HERE i nwere ntuziaka ka iwulite FM gị.
Kọmputa feeder anụ ụlọ
Oge obula ezumike ahu biara, nsogbu nke ma obu ndi ozo anyi hapuru anu ulo anyi na abia. Luckily maka ndị niile bi na nwamba, ha nwere ike ịhapụ ha naanị, na-eme ka mmadụ bịa leta ha, ọbụlagodi na ọ ga-eme ka ha nwee mmetụta ịhụnanya otu ugboro kwa ụbọchị ma ọ bụ otu ugboro kwa ụbọchị abụọ. Ma nke ahụ bụ daalụ ọzọ na Raspberry Pi anyị ga-enwe ike ịmepụta feeder akpaka anyị nke ahụ ga-ekesa nwamba anyị, ma ọ bụ anụmanụ ọ bụla ọzọ nri nri na-akpaghị aka.
Ngo ngo ana baptism Ike Cat NriMepụtara site na David Bryan, ọ nabatara ebe niile ma onye ọ bụla nwere mmasị ijikwa ihe anụ ụlọ ha na-eri, ọbụlagodi mgbe ezumike. Ọ bụrụ na anyị gbakwunye igwefoto onyunyo, na-ejikwa ekele anyị Raspberry Pi, ọrụ ahụ nwere ike ịmasị ma baa uru.
Njikwa olu maka ụgbọala gị
Siri, a maara nke ọma olu nnyemaaka na incorporates dị iche iche Apple ngwaọrụ, nwere ike inyere anyị aka na nke a oru ngo na jikwaa imeghe ọnụ ụzọ ụgbọala anyị na iwu olu. Anyị na-adọ gị aka ntị na ọrụ ahụ adịghị mfe, mana nsonaazụ ya bụ ọmarịcha ọhụụ na nke kachasị nke ọma. Ma ọ bụ na anyị agaghị esi n'ụgbọala ahụ mepee ụzọ ụlọ ụgbọala ahụ, ma nwee olile anya na anyị agaghị ewepụ isi ihe na windo ọzọ iji mepee ya.
Igwefoto ihe mmetụta
Anyị ahụworị ọtụtụ ngwaahịa nwere ike iji Rasberi Pi mee ebe ọ na-aghọ igwefoto onyunyo, mana anyị ka nwere ike ịga n'ihu n'otu nzọụkwụ. Ma ọ bụ na ngwaọrụ a dị ike na-enye anyị ohere ịmepụta, karịa ma ọ bụ obere mfe, a Igwe onyunyo na-achọpụta mmegharị, nke dịka ọmụmaatụ nwere ike ịhapụ anyị ịchọ mmegharị enwere ike n'ime ụlọ anyị.
Ọ bụrụ n’ịchọghị inye ikike ijikwa ngagharị ahụ, nke nwere ike bụrụ ntakịrị mkparị, ị nwere ike iji ya wee chịkwaa ma anụ ụlọ gị na-agagharị n’ụlọ ma ọ bụ gaa n’ubi ahụ.
En njikọ a Have nwere usoro niile ị ga - agbaso iji wuo igwefoto ihe mmetụta nke aka gị.
MoccaPi ma ọ bụ kọfị kacha mma ejiri Pipe Pi
Mgbe anyị na-ekwu na ojiji nke Raspberry Pi enweghị oke ngwụcha, na agbanyeghị na ọtụtụ na-enyo ya enyo, ana m atụ ụjọ na anyị emejọghị otu iota. Ma ọ bụ na a na-ewu ewu na ngwaọrụ esesịn jisiri iru anyị kichin site n'aka nke MoccaPi, onye na-eme kọfị maara ihe iji mee kọfị ma ọ bụ tii, dị ka echiche nke ndị niile nwara ya, dị mma.
Mkpokọta ọnụahịa adịchaghị oke, ọ bụkwa na ozugbo anyị nwetara ihe niile anyị kwesịrị iji wuo igwe kọfị a, anyị ekwesịghị ịga karịa euro 80.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmalite iwu MoccaPi taa, lee ndị a Ntụziaka na i kwesịrị iso.
Ogige dijitalụ mara mma
Ọ bụrụ na osisi na-amasị gị ma ị gaara enwe mmasị ịnwe obere ala iji nwee ogige jupụtara na ifuru, mana ọ nweghị ike ịbụ, ikekwe ọrụ a nke nwere Raspberry Pi dị nso n'ihe ịchọrọ. Ọ nwere ike ịdị ka egwuregwu, mana ekele otu n'ime ngwaọrụ ndị a dị ike anyị nwere ike iwulite n'ụzọ kachasị dị mfe ị nwere ike iche n'echiche, yana kwa inwe obere ọrụ, a ogige dijitalụ nke okooko osisi na-agagharị, nnụnụ ma ọ bụ ndị na-atụgharị uche na-egosi gburugburu okooko osisi ma ọ bụ na nke a na-enwu ọkụ n'abalị.
Na vidiyo YouTube ị nwere ike ịhụ n'elu ị nwere ntuziaka niile (na njikọ ọzọ),, ọ bụ ezie na ị nwere RaspBerry Pi anyị na-akwado ka ị jiri echiche gị mepụta ogige ịtụnanya na nke mara mma nke ga-adị ndụ mgbe ọ bụla ịchọrọ.
RaspBerry Pi agafeela n'oge na-adịghị anya site na ịbụ ngwaọrụ nke ndị ọha na eze na-amaghị, ka ọ bụrụ ngwaọrụ dị oke mkpa maka nnukwu oru ngo. N'isiokwu a, anyị egosiputala gị ezigbo aka maka ụlọ gị, mana ojiji na ngwa nke obere ngwaọrụ a na-adịghị ọnụ ma ọ bụ enweghị njedebe. Ọtụtụ mmadụ na-ekwu na ohere anyị nwere na RaspBerry Pi na-aga ruo n ’echiche gị na ikike ichepụta ma soro ya rụọ ọrụ.
You mepụtara ọrụ na RaspBerry Pi maka ụlọ gị nke ịchọrọ na ọ kwesịrị ịpụta na ndepụta a?. Ọ bụrụ otu a, ka anyị mara site na ozi ịkpọtụrụ ma ọ bụ oghere edebere maka ikwu na post a ma anyị ga-etinye ya na listi ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Ntu Pi » Rasberi Pi oru ngo
José María Díaz nke San Pedro Riera dijo
Enwere m ụlọ ọrụ mgbasa ozi na Raspbery pi na nkesa LibreElec (obere Linux na Kodi wuru). Ọ dị okomoko ma - site na iji ngwa android na-akpọ Kore, ị nwere ike ijikwa ya site na ekwentị mkpanaaka gị… Ọ gaghị adị ọnụ ala.
Zaghachi José María Díaz si San Pedro Riera
M na -echikota igwe nri nri mana nke nkita m nke n’enweghi ike inweta ihe obula karia ihe ma obu nchara n’ihi na ha mebisiri ya na uzo a ga-esi nye gi nri n’ime oru ngo a iziputara gi bu ihe na-adi nma, obu n’agbanyeghi ya. M na-eji ESP32 nke na-achịkwa 64kg ike servo nke na-ege ntị na ihe nkesa nke raspber ka mma. Ka mma kewapụ ngwa api site na ọrụ ọrụ.